Information for Myanmar about Islam: MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း
MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း
မြန်မာ မူဆလင်များအတွက် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ခြင်း။
မကြာသေးမှီ က ပြည်ပ ၌ အခြေစိုက် နေထိုင်ကြသော မြန်မာ မူဆလင်များမှ စုပေါင် ပြီး MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ စည်းတစ်ခု ဖွဲ့ စည်းလိုက်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့ အစည်း ဖြစ် ပေါ်လာရခြင်းမှာ…OIC နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်များ၏ တိုက်တွန်းမူနှင့် မြန်မာမူဆလင်များ၏ မွေးရာပါ လူသား အခွင့်အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတို့ အတွက် နိုင်ငံတစ်ကာ၏ မူစံချိန်နှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ရရှိစေရန် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားရန် လိုအပ်မှုများ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ OIC အတွင်းရေးမှုးမှလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်သော OIC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ထဲတွင် ဒေါက်တာ ၀ါကာအွဒ္ဒင်ဦးဆောင်သည့် မြောက်အမေရိကတိုက် ရိုဟင်ဂျာ အစည်းအရုံးမှ ဖြစ်စေ၊ MMCRM မှ ဖြစ်စေ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ပါဝင်စေလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိခဲ့သည်။
MMRCM ၏ အဓိ ရည်ရွယ်ချက်မှာ……
§ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အားလုံး လူမျိုးဘာသာမခွဲဘဲလျှက် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေး။
§ ဘာသာရေး အရ မတရား ခွဲခြား ဖိနှိပ်မူ ပပျောက်ရေး။
§ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များအား ဗျူဟာမျိုးစုံ သုံးလျှက် သိက္ခာချမူ…၀ါဒ ဖြန့်မူများချုပ်ငြိမ်းရေး။
§ အစိုးရမှ လူနည်းစုတို့အား တရားမျှတစွာ ကာကွယ်ပေးရေး။
§ မူဆလင်များအား မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခံရမူများ..အစော်ကားခံရမူများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရေး နှင့် အခြားသော တရားမျှတသော လိုအပ်ချက်များကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် သံတမန်ရေးရာ နည်းလမ်း သုံးပြီး တောင်းဆိုသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခု လက်ရှိ MMCRM အနေ နှင့်လည်း မူဆလင်နိုင်ငံသံရုံးများ ၊အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် အလုပ်လုပ် နေ ပါသည်။
MMCRM အဖွဲ့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြည်ပမူဆလင်အခြေစိုက် လှုပ်ရှားမူကြီးဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ…ပြည်ပ နိုင်ငံ တော်တော်များများတွင် ကိုယ်စားလှယ်များ ခေါင်းဆောင်များ သင့်တော်သလို ထားရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် မိမိ ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဟုတ်ဘဲ သာသနာအတွက် မြန်မာမူဆလင် ကောင်းကျိုးအတွက် အကျိုးဆောင်မည့်သူများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ မူဆလင်ညီနောင်များ မည်သည့် မူဆလင်မဆို ပါဝင် လုပ် ဆောင် နိုင်ပါသည်။ မိမိ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင် ကူညီ အားပေးပါရန်လည်း တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အင်ရှာအေလ္လာ ယနေ့မှစပြီး ကျနော်တို မြန်မာမူဆလင်များ ဘာမှ အားငယ်စရာ မရှိတော့ပါ၊ ဘာမှ ကြောက်နေစရာ လည်း မရှိတော့ပါ…. ငုံ့ ခံနေစရာ လည်းမလိုတော့ပါ…ကျနော်တို့မှာလည်း အလ္လာဟ်ဟုအရှင်မြတ်ဆီမှ အင်အားတွေ ရောက်ရှိလာပါပြီ…လမ်းစတွေ ပွင့်သွားပါပြီ…ပန်းတိုင်က လက်တစ်ကမ်းသို့ ရောက်နေပါပြီ … ကျနော်တို့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မူ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်… ကျနော်တို့ ဘယ်လောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုချင်သလဲ.. အဲဒီလောက် အချိန်တိုတိုနှင့် ရမယ်… ဆုံးဖြတ်ချက်က ကျနော်တို့ မြန်မာ မူဆလင်တွေ အထဲမှာပါ… ကျနော်တို့က ရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
ပြည်တွင်းမှ မူဆလင် အဖွဲ့များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလများကလည်း OIC အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အား မိမိတို့ မြန်မာ မူဆလင်များ ၏ ဆုံးရှုံးနေသောလူ့အခွင့်အရေးများ၊ မတရားဖိနှိပ် အနိုင်ကျင့်နေမူများ၊ ဘာသာရေး ကွဲပြားမူကြောင့် အနှိမ်ခံနေရခြင်းများကို OIC အား တင်ပြပြီး..မြန်မာ အစိုးရ ကို ဖိအားပေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ပြည်ပ ရောက်နေသော မြန်မာ မူဆလင်များ က တတ်စွမ်းသလောက် ကြိုးပမ်းရန်လိုအပ်သလို… ပြည်တွင်းမှ မူဆလင်များကလည်း တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်…..နည်းပေါင်းစုံ ဖက်ပေါင်းစုံမှ ကြိုးစားမှ လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်၊ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ မွေးရာပါ အခွင့် အရေးတွေ မြန်မြန်နှင့် ပြန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
နောက် ဆက်လက်ပြီး MMCRM ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီဝင်များ နင့်ှအခြားသော အသေးစိတ်များကို ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါမည်။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် မေး ခွန်းများ မေးနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး နိဂုန်းချုပ်အနေနှင့် ကျနော်ညီနောင်/ နှမများကို သတိပေးချင်တာက…. ဒီသတင်းကို SHARE လုပ်နိုင် သလောက် လုပ်ပေးပါရန်….. ONLINE မှာ သာမက ပြင်ပလောကတွင်လည်း သတင်းဖြန့် အကြောင်းကြားပေးရန်… လူ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင် ကူညီပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
အောင်မြင်မူ ရနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဒိုအာ (ဆုမွန်တောင်းပေးခြင်း) လည်း လုပ်ပေးကြပါ…
လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို ညီနောင်သားချင်း ရိုဟင်ဂျာများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်....
ဦးဌေးလွင်ဦး၏ အမျိုးသားရေးအပေါ်ပေးဆပ်မှုတို့အား ပိုမိုသိလိုသူများ အနေဖြင့် ဆက်လက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by A Muslim at 6:21 PM
ထိပ်ပြောင်လေး January 18, 2013 at 9:39 AM
အလ္လာရှင်တော်မြတ် အလိုတော် အရ လူတစ်ယောက်ကို လည်လှီးပြီး အစ္စလာမ် တရားတော် နဲ့ အညီ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်း..ခေါင်းမဖြတ်ခင် ကိုရမ်ကျမ်းစာ မြတ်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပြီး ခေါင်းဖြတ် သတ်မဲ့ လူကို အလ္လာရှင်တော်မြတ် ဆီမှာ အရင်ပူဇော်ပသရ ပါတယ်...လည်ပင်းကို လှီးတော့မယ် ဆိုရင် အလ္လာဟူ အက်ဘာ လို့ ကျယ်လောင်စွာ အော်ပြီး လည်ပင်းကို တစ်စိမ့်စိမ့် လှီးဖြတ်ပါတယ်....မိတ်ဆွေတို့ ကြည့်ဖို့ အတွက် တင်ပေးတာပါ...ကြောက်တတ်တဲ့ သူတွေ မကြည့်ပါနဲ့
mahinda monk April 29, 2014 at 9:07 AM
အပြစ်‌ရှိသူ ‌တွေကို ဖန်‌ဆင်းရှင်‌ အမည်‌တွင်‌ ‌သော အလ္လာလ်‌ မှအပြစ်‌ ‌ပေးပါလိမ့်‌မည်‌။သို့‌သော်‌ အစ္စလာမ်‌မစ်‌ နိုင်‌ငံ များတွင်‌အလ္လာလ်‌ ကို‌ကျော်‌၍ တရားရုံးများ ကအပြစ်‌စီရင်‌ ‌နေခြင်းမှာ အလ္လာလ်‌ မအား၍လား ။တရားသူကြီးများကို အလ္လာလ်‌က လုပ်‌ပိုင်‌ ခွင့်‌ ‌ပေးထားသလား စဉ်းစားစရာပါ။
toke gyi March 25, 2015 at 11:26 AM